Featured Blog Posts – November 2013 Archive (7)
बैद्यको बन्द : फोटो फिचर
संविधानसभाको निर्वाचनको मुखमा आएर नेकपा-माओवादी सहितको ३३ दलीय मोर्चाले आव्हान गरेको आम हड्ताल सहितको बन्दको पहिलो दिन दिउसोसम्मको अवस्था हेर्दा बन्दको प्रभाव केही मात्रामा भएपनि त्यस्तो ठुलो अप्रिय घटना भने हुन पाएको छैन । बन्दका बारेमा पक्ष-विपक्ष बिचको जुहारी सुन्दा र सडकमा बिहानैदेखि सेनाको गस्ती समेत हेर्दा बन्दका क्रममा केही हुन्छ कि भन्ने डर आम नागरिकमा भने थियो नै । सोही बन्दका क्रममा थापाथलीदेखि पुल्चोक आकाशेपुलसम्म आईपुग्दा देखिएका केही फोटोहरु यहाँ राखिएको छ…
Added by Prakash Lamichhane on November 11, 2013 at 3:00pm — No Comments
ढुंगे क्यानभासमा चित्र बनाउने को होला !
केहि समय अघि लुम्बिनी घुमघाम गर्न भनेर हिँडे । चितवनको रामनगर पुगेपछि देबघाट पुगेर जलयात्रा (र्‍याफ्टिङ्) गर्ने उत्कण्ठा यो मनमा पलायो अनि लागेँ देबघाटतिर । नारायणी नदीको किनारै किनार हुँदै पुगेँ बाटोमा लाश पोल्ने र नदीबाट ढुंगा बालुवा झिकेको दृश्य हेर्दै सुन्दर पहाडको खोँचबाट नागबेली बनेर बगेको कालीगण्डकी नदीको मनोरम दृश्य हेर्न कालीगण्डकी नदीको रामनदीधाम (राम्दीघाट) देवघाट क्षेत्र सम्म पुगे ।स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, नवलपरासी र चितवनको झण्डै एकसय ५० किलोमिटरको लामो दुरीको यस खण्डमा मानिसहरु…
Added by Gopal siwa on November 9, 2013 at 4:30pm — No Comments
निर्वाचन, बालबालिका र भविष्य
'हामी पतिपत्नी नै भोट माग्न हिँड्नुपर्दा घरमा छाराछोरीको विजोग छ, बालअधिकारको हनन् मेरै घरमा पनि भैरहेको छ' एमाओवादीका भोजपुर जिल्ला स्तरीय एक नेताको भनाइ हो यो हालै जिल्लामा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा । संविधानसभा निर्वाचन २०७० नजिकिँदै जाँदा विभिन्न अधिकारको कुरा संगसंगै बालअधिकारको कुरा पनि उठिरहेको छ । तर यसको सवाल जति भाषणमा गरिन्छ त्यति कार्यान्वयन भएको पाँईदैन ।
हुन त अधिकारको कुरा गर्दा त्यसका धेरै पक्षलाई केलाउन आवश्यक छ । संविधानसभा निर्वाचन आचारसंहितामा बालबालिकालाई…
Added by Eksan Rai on November 7, 2013 at 12:00pm — No Comments
सरकारी र निजी विद्यालयमा आजभोली निकै खस्कदो शैक्षिक अवस्था देखिन्छ । आफ्नो मर्यादा के हो? मैले गर्ने काम के हो? आफ्नो कर्तब्य के हो? भन्ने कुराको सोच नै मान्छेहरुबाट हराई राखेको छ र यस्ता नैतिक शिक्षाहरु बुढापाकाको मुखबाट मात्र सुन्न पाइन्छ, बच्चालाई असल भन्दा ठूलो बनेको देख्न चाहने समाज बनिसकेको अवस्थामा । यस्तो खालको समाजका बिचमा पनि एउटा पृथक सोच र संस्कारको छनक दिने स्कूल देख्न सकिन्छ सिरहा जिल्लाको धनगढी गाविस वार्ड नं १ नैनपुर सोनापुरमा । सगरमाथा प्रज्ञा पीठ नामक उक्त विद्यालयले कक्षा…
Added by Kamal Paudyal on November 4, 2013 at 6:00pm — No Comments